Wikiality, Runta, iyo Saxnimada | Martech Zone
Khamiis, Agoosto 3, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxay umuuqataa in warbixinta Colbert ay sababtay buuq Wikipedia ah qaybtaan cusub ee ku saabsan Wikiality.
Burburin ku socota Wikipedia
Wikipedia ayaa xannibaya isbeddelada maroodiyaasha
Had iyo jeer waxaa jira tilmaam run ah oo ku saabsan sarbeebida Colbert oo aan runtii ku qanacsanahay. Xaaladdan oo kale, Wikiality waa isbeddel ku yimaada awoodda tifaftirka. Lamaane ayaa soo xiganaya… “Awoodda Absolute gabi ahaanba way musuqmaasuqdaa” iyo “Taariikhda waxaa qoray kuwa guuleystay”. Waxaan ka cudurdaaranayaa in aanan waqti siinin tixgelinta xigashooyinkan.
Ujeeddadaydu waxay tahay in Wikiality uu u oggolaanayo dadka waawayn inay ku majaajiloodaan oo ay qalloociyaan runta sida tusaalayaal kale oo aan ka maqalnay dowladdeenna iyo warbaahinta guud:
CBS waxay ku sameysay dukumiintiyada beenta ah
Bush wuxuu ku sameeyay Hubka wax gumaada
Baybalka (Akhri khaladka Ciise), Yuhuudda, Islaamka…
Sayniska, Al Gore iyo Kulaylka Dunida
Kala Goynta Kaniisadda iyo Gobolka
Liisku aad buu u dheer yahay….
Ma dhahayo mid ka mid ah tusaalooyinka kor ku xusan waa xaqiiqo ama mala awaal… laakiin dooddu waxay ina tusaysaa in dadka si fudud loo maareyn karo. Haddii aan haysto shahaadada saxaafadda, waa inaan runta sheegaa. Haddii aan qoro buug, waa inaan khabiir noqdaa. Haddii xisbigayga siyaasiga ahi yiraahdo, waa sax.
“Runta” iyo “Sugnaantu” waa dhalanteed uu u fasiray qofka u sheegayo sidan oo kale. Colbert iyo "Wikiality" ayaa si fudud u dhigay iftiinka. Marka laga hadlayo dib-u-dhaca "bogga", wax qaylo ah kama maqli doontid innaga! Waan faraxsanahay sababtoo ah waxaan ka hadalnay tan in muddo ah. Si ka duwan buug, joornaal, war-bixin, ama dowlad, in kasta oo, internetku u oggolaado dadka inay ka doodaan waxa runta iyo saxsanaantu tahay!
Taasi waa sababta Wikiality u fiicantahay!
Isle'eg Dhejinta Blog